Fizahantany miambina amin'ny fizahan-tany fahavaratra ny fizahantany any Karaiba
Home » Lahatsoratra farany farany » Karaiba » Fizahantany miambina amin'ny fizahan-tany fahavaratra ny fizahantany any Karaiba
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny angona avy amin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba dia manome soso-kevitra ny fanodinana slide izay nanomboka tamin'ny faran'ny volana martsa 2020.
Ny firenena CTO dia niasa tsy nisy fiasa mba hifehezana ny coronavirus ary hanokatra ny toekareny indray.
Karaiba dia manomboka mamadika ilay slide izay nanomboka tamin'ny faran'ny volana martsa 2020.
Misy ny porofo mitombo fa ny fangatahana mihoampampana dia mirongatra aloha be ary amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa noho ny nambara mialoha.
Miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra 2021, misy porofo mitombo eo amin'ny tsena fa ny fangatahana mihoampampana dia miakatra aloha be ary amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa noho ny nambaran'ny forecasters mialoha. Mandritra izany fotoana izany, ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) dia entanin'ny tahirin-kevitra avy amin'ireo firenena mpikambana ato amintsika, izay niasa tamim-pitandremana mba hifehezana ny coronavirus sy hanokatra ny toekareny indray.
Na dia hita aza fa tsy dia mampahery ny fihenan'ny 60 isan-jato tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021, raha oharina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa, dia toa tsy dia mampahery, ny fandinihana akaiky kokoa dia milaza fa manomboka mamadika ilay slide ilay Karaiba nanomboka ny faran'ny volana martsa 2020.
Izany dia asehon'ny fihenan'ny haavon'ny fihenam-bidy izay nosoratan'i Karaiba nandritra ny dimy ambin'ny folo volana lasa. Ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020 no vanim-potoana farany fivezivezena ara-dalàna, rehefa nitsidika ny faritra ny mpitsidika 7.3 tapitrisa iraisam-pirenena (fahatongavan'ireo mpizahatany). Tamin'ny Janoary sy Febroary 2021, ny olona tonga tany amin'ny faritra dia nihena 71% mahery raha oharina amin'ny roa volana lasa tamin'ny taon-dasa. Na izany aza, ny fihenan'ny 16.5 isan-jato tamin'ny martsa 2021 raha oharina tamin'ny martsa 2020 dia famantarana ny haavon'ny fiverenan'ny fironana mihena ny isan'ny mpizahatany tonga.
Ny angona nangonina avy amina toerana roa ambin'ny folo izay nitatitra ny fahatongavan'ireo mpizahatany tamin'ny aprily 2021 dia mampiseho fa ny tsirairay amin'ireo toerana ireo dia nisoratra fitomboana, raha ampitahaina amin'ny volana aprily 2020, rehefa noferana ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany. Toy izany koa, ireo tonga mpizahatany dia niverina tamin'ny toerana nitatitra ny angon-drakitra ho an'ny Mey. Marihina anefa fa ny isan'ny mpitsidika mijanona amin'ny trano dia mbola eo ambanin'ny ambaratonga mifanaraka amin'izany amin'ny taona 2019.
Nahavelom-bolo ny fanambarana vao haingana nataon'ireo mpilalao seranam-piaramanidina izay i Karaibeana no tsena lehibe. Nandritra ireo andian-dresaka nifanaovanay tamin'ny Internet tato ho ato, dia samy CEO ny British Airways, Sean Doyle, ary ny VP an'ny varotra ho an'ny Karaiba any American Airlines, Christine Valls, dia niresaka momba ny fahalianana be amin'ny dia any amin'ny faritra. Raha ny marina dia nanambara Ramatoa Valls fa niroborobo ho an'ny American Airlines i Karaiba, miaraka amin'ny antonony entana maherin'ny 60 isan-jato amin'ny faran'ny volana Mey 2021, ary nikasa ny hisidina sidina isan'andro any amin'ny faritra ity kaompaniam-pirenena ity amin'ny fahavaratra noho ny tamin'ny taona 2019. Nilaza tamin'ny CTO ny American Airlines tamin'ity herinandro ity fa nanampy lalana dimy vaovao any Karaiba amin'ity fahavaratra ity, miaraka amin'ny fahenina nampiana tamin'ny volana Novambra - ary hanompo toerana 35 any Karaiba.
Miorina amin'ireo mari-pamantarana ireo, ny CTO dia miambina hatrany amin'ny fanantenana ho amin'ny fitsangatsanganana amin'ny fahavaratra ary mandritra ny taona 2022.
Ekena fa tsy maintsy asiana fahalemem-panahy ny fisian'ny tranga COVID-19 vaovao izay miakatra haingana any UK sy Etazonia, roa amin'ireo tsena loharanom-baovao any Karaiba. Ireo dia famantarana fa ny virus dia mijanona ho fandrahonana lehibe izay afaka mamadika haingana ny fandrosoana rehetra nataontsika.